Somali Airforce History – http://www.somalinationallibrary.so/
http://www.somalinationallibrary.so/ » Somali Airforce History
Waxaan hambalyo khaas ah u diraa ruugcadaaga duuliye sare Max’ud Cabdullaahi Barre (Faytaan) iyo xaaskiisa oo ka nool shanti duuliye ee C.C. wax ka aasaastay, laysinka duulimaadka diyaaradahana qaatay 1954tii kuna duulay diyaarado wadartoodu kor u dhaaftay 15 oo isugu jiray mileteri iyo rayid. Faytaan waa duuliyihii ugu horreeyay ee dalka Masar kusoo duulay 1961dii diyaarad dagaal oo jeet ah noocii ugu horreeyay ee ciidankeenna 1963dii salab looga dhigay.Max’ud Cabdullaahi wuxuu kale oo uu dhidibbada wax uga aasay shirkaddii Soomaali Airlines oo uu duuliye ka ahaa 1964 ilaa 1990kii. Waxaan hambalyo taas la mid ah u diraa Duuliyeyaashi, Injineeradi iyo Farsamayaqanadii “Shirkaddii haybadda qaranka Soomaaliyeed” ee Soomaali Airlines iyo garabka diyaaradaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo labaduba badankoodu ka soo farcamay C. Cirka Soomaaliyeed.
2duuliye iyo 30 rakaab ah
Mugga haamaha shidaalka
804 gallon ama 3047 lit.
Xawaaraha ayadoo la tixgelinayo nabadgelyada iyo tashiilka shidaalka
Fogaanta ay gaari kartay haamaha Shhidaalkoo u buuxa
Culayska qalfoofka diy/dda
Shixnadda ay qaadi kartay
Haddaba waa taas diyaaraddi aad maanta ku duuli lahaydeen, annagu idinlama socono maanta ee diyaaradda u dhaqaalaysta sidaad geela u dhaqataan, hase yeeshee uga taxaddara sida isha saxarka looga dhowro, asagoo taas uga gollahaa siday iyagu noo bareen in diyaarad loogu dhaqmo iyo gaar ahaan sida loo xannaaneeyo.
Ogaada in diyaaraddi u dhici karto dhowr kg oo siyaado ah iyo khalad yar oo ku yimaada isku-hallayn iyo isku-kalsoonaan. Waxaad ciidan u tihiin dal curdan ah oo dhawaan gobanimadiisa qaadan doona ee haddi yoolka mustaqbalkiinna gudcur hareeyo, wax u qabadka dalkiinna ha ku tallamina ee u dulqaata daacadna u noqda madaxdiisa. Waxaa idin soo maridoona marxalado qallafsan oo dhib iyo qahar badan oo badanaa ku yimaada maamulxumo, talisxumo iyo waaya arag la’aan oo aydaan maanta saadaalin karina ee si sahal ah ha u raja beelina, ka baaraan dega, kana dhur suga, waaya joognimadiinna iyo daacadnimadiinna ayaa tartiib tartiib u xallin doontee